KA ILAALINTA LO'DA XILLIGA JIILAALKA: XANNAANADA, QUUDINTA RAASHINKA IYO XEERARKA WARAABINTA - XOOLAHA
Tilmaamaha gaarka ah ee ilaalinta lo'da xilliga jiilaalka
Qodob muhim ah oo wax ka beddeli kara hagaajinta joogtada ah ee caanaha lo'da waa xilli-beereed. Haddii wax walba ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin neceybyada guryaha ee xagaaga ee lo'da, ka dibna jiilaalka soo socda wuxuu kicinayaa su'aalo badan, gaar ahaan bilowga beeralayda.
U diyaargaroobista barniga qabowga qaboobaha
Diyaargarowga xilliga jiilaalka inta badan waxay bilaabataa shaqada shaqada ee barn, kaas oo ah in si habboon loo qalabeeyo:
ku daadi dildilaaca iyo dildilaaca darbiyada qalabka insulating (aan ka yarayn 30%);
si aad u diirisid albaabada iyo daaqadaha si ay si adag u xiran yihiin: tan waxaad isticmaali kartaa maro caws, boorsooyin jir ah, qalabka daadinta iyo duubis dheeraad ah;
si ay u eegaan qaybta saqafka, haddii loo baahdo, dayactirto iyo saxaraha dhogorta macdanta;
si loo abuuro koronto lagama maarmaanka ah iyada oo la adeegsanayo nalalka dhejiska ah ama qalabka iftiiminta iftiinka LED, leh nolol waqti dheer;
nadiifinta guud ee nadiifinta leh jeermis dilaaca, cabbitaanka madadaada, quudinta, qaybaha.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido sidii aad u dhisi lahayd barneed si aad u sameyso gacmahaaga.
Qaadashada mishiinka xaraashka ah ee lagama maarmaanka ah, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo heerkulka mustaqbalka iyo xaaladaha qoyan (mikroclimate) qolka. Cunno diyaar u ah jiilaalka waa in si wanaagsan looga ilaaliyo qabowga iyo isla markaa si joogto ah u hawo hawo.
Shuruudaha aasaasiga ah
heerkulka hawada waa inuusan hoos u dhicin +4 ° C, xulashada ugu fiican waxay noqoneysaa +8 ° C;
socodka hawada waa in lagu hayaa xaddiga 17 mitir oo mitir saacad kasta oo loogu talagalay boqolley kasta oo ka mid ah lo'daha qaangaarka, laga bilaabo 50 mitir mitir saacadiiba xayawaanka yaryar;
xawaaraha hawada ee hawada - qiyaastii 0.5 m / s;
qoyaanka hawada - 50-60%.
Daryeelka lo'da ee jiilaalka
Dayactirka lo'da ee xilliga jiilaalka waa arrin aad u dhib badan oo leh sifooyin gaar ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tixgelisid dhammaan shuruudaha muhiimka ah, wax kasta oo qabow ah ma keenayso dhibaatooyinka lo'da ama milkiilaha.
Ka hor inta aanad ku ridin sariirta kulul ee barnadda, waa inaad daryeeshaa dabaqa tayada leh. Waa macquul in maaddada laga sameeyey qoryaha dabiiciga ah ama, xaaladaha ba'an, ee la taaban karo.
Waa muhiim! Beeralayda qaar waxay intaa ku dareen in ay ku biiraan peat si caws. Si kastaba ha noqotee, qaybta ayaa leh faa'iido weyn - waxay si xoogan u xajineysaa candhuufta lo'da, taas oo u adeegi karta jawi wanaagsan oo loogu talagalay jirooyinka.
Qashin-xajinta waa inay ka koobnayd qaybo yar oo cows ah (qiyaastii 15 cm) iyada oo heerkul ah heerarka ugu fiicnaanta qof kasta oo ka yimid 2.5 kg. Maaddooyinka kululeeyaha iyo qoyaanka-nuugista, daboolkani wuxuu aad uga sareeya alaabta kale: balka, dhirta qoryaha ama caleemaha.
Dhismaha dayactirka joogsiga
Joogitaanka joogtada ah ee lo'da ee dhogorta xakamaynta ayaa waxay lagama maarmaan u tahay fulinta shuruudaha qaarkood:
Lo'da waa in loo xirxiraa hal dhinac oo xadhigga ah ee xargaha, tan kale - qoryaheeda. Sidaa daraadeed, dhejinta si fudud ayaa loo saari doonaa haddii loo baahdo. Waxa ugu muhiimsan waa in dhererku aanu faragelinin xayawaanka si ay si xor ah ugu tagaan waraabiyaha iyo feederiyeyaasha.
Xilliga jiilaalka, barnadu waa la nadiifin karaa laba siyaabood: digada waa la goostaa maalin kasta, qashin cusub ayaa la faafiyaa, tan labaadna waa digada aan la goostin illaa guga, iyo lakabka cusub ee sariirta cufan ayaa lagu daboolayaa dusha sare. Xulashada labaad waxay ku habboon tahay beeraha ku yaal gobollada leh jawiga qaboobaha ee adag - barkin badan oo barkin ah ayaa habeyn doona lo'da illaa dhammaadka jiilaalka.
Maalin kasta, sababa lo'du waxay u baahan tahay in la nadiifiyo, mararka qaarkood, nidaamyada biyaha, oo la socda miisaan, waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta wareegga dhiigga ee maqaarka, kordhinta wax soo saarka qanjirada iyo qanjidhada xayawaanka, oo kordhiya raashinka xayawaanka. Maareynta waxaa lagu sameeyaa adigoo isticmaalaya burush adag iyo biyo kulul, had iyo jeer saacad ka hor intaan la iibin ama hal saac kadib.
Ma taqaanaa? Lo'da kasta ee sanka waxay leedahay qaab shakhsi ah oo lagu barbardhigi karo faraha dadka. Beeralayda mid ka mid ah dawladaha Mareykanka ayaa si guul leh u isticmaala adeeggan marka la raadinayo qaansooyinka la soo xaday.
Socodka joogtada ah ee xoolaha xilliga jiilaalka wuxuu ka caawiyaa in muruqyada xayawaanka lagu hayo midabka saxda ah. Haddii lo'da si joogto ah loogu hayo laydh, ka ilaali dhaqdhaqaaqyada firfircoon oo ha u ogolaan in ay ku adkaato xitaa qorraxda daciifka ah - waxay noqdaan kuwa nacas ah, ha muujin xiisaha jinsiga oo ay u lumiyaan rabitaankooda. Xayawaanka dhexdooda, lafaha ayaa sidoo kale jilicsan kara, taas oo mar dambe keeni karta dhaawacyada sagxadaha ee dadka waaweyn, iyo weylaha - rickets.
waxaa lagama maarmaan ah in loo isticmaalo socodka barafka ee xoolaha si tartiib tartiib ah, tan iyo dayrta;
qalinka waa in la dhisaa meel u dhow lo'ada lo'da, oo leh aag ah qiyaas ahaan 15-20 mitir labajibbaaran. m, gudaha kaas oo laamiyo laamood curdun cusub iyo quudin gooni ah si loogu quudiyo qayb ka mid ah kalluunka;
xooluhu waxay u baahanyihiin inay maalin walba socdaan 2-3 saacadood oo cimilo wanaagsan, iyada oo aan roob lahayn ama baraf duufaan;
Deyrta waa in lagu daboolaa gogol xoqan, markaad qoyan tahay waxaa suurtagal ah inaad ku darto lakabka cusub ee cawska ama cawska si aad u daboosho si lakabka sare mar walba u qalalo.
Waa muhiim! Beeraleydu waxay u baahan tahay in ay baraan cunnooyinka si ay u adkeeyaan habka maalinlaha ah, isla mar ahaantana waa inay cunaan, socdaan, cabaan biyaha oo ay qaataan nidaamyada biyaha, maaddaama xadgudub kasta oo ka timaadda jaangooyo loo qoondeeyey ay saameyn ku yeelan karto wax-soo-saarka.
Biyaha iyo cuntada ee lo'da xilliga qaboobaha
Xilliga jiilaalka, lo'du waxay si xoog leh u isticmaashaa tamar badan, sidaa daraadeed waxaa muhiim u ah beeralayda in ay samaystaan ​​cuntooyin dheellitiran, nafaqo leh oo ay siiyaan qadarka saxda ah ee biyaha diirimaad leh.
Xayawaanku waxay quudinayaan saddex jeer maalintii iyagoo leh isku-dheeli tiran inta u dhaxaysa cuntooyinka. Qiyaasta cuntada ayaa u eg sidan:
Hayaha laga bilaabo cowska dilka ah (qaybta waxaa lagu bedeli karaa cows);
digriiga baradho, bocorka, dabacasaha;
qudaarta borotiinka gaarka ah.
Waqti marba mar ayaa cuntadu ku qallajinaysaa silage iyo khudaarta xididka leh. Cunto cunto waa in la soo saaraa subaxdii iyo qadada, si aan ahayn - quudin kasta. Hal shakhsi ah 1 maalin oo shaqeynaya caadi ahaan waa inay cunaan laga bilaabo 30 ilaa 40 kg oo wadajir ah.
Soo ogow cawska cawska cuno, waxa wax lagu daro ayaa loo baahan yahay lo'da, iyo waxa la sameeyo haddii aan lo'da si fiican u cunin.
Jadwalka qiyaasidda jiilaalka ee lo'da (ee kg) oo culeyskiisu yahay 400-500 kg iyo dhalidda caanaha sanadlaha ah ugu yaraan 3000 kg dhowr maalmood:
Quudin gaar ah 8 10 12 14 16
Dhul dabiici ah ama dalagyada beeraha 6 6 7 8 8
Caws dhooban oo qallalan 2 2 2 2 2
Silo ka soo cayayaanka iyo dalagyada beerta 10 10 10 10 10
Xididada iyo bocorka 10 10 13 14 18
Nadiifinta qudaarta 1 1 1 1 1
Mawduucyo 0,5 0,6 1,8 2 2,5
Salt 0,52 0,050 0,008 0,077 0,087
Kala duwanaanta cuntada qabow waxay noqon kartaa waxyaabaha sida:
Chaff - qaybo yar oo ah asliga ah iyo kor u kaca dalagga hadhuudhka ah, kaas oo sii haray ka dib. Isla markiiba ka hor intaan soo saarin badeecada waa in la nadiifiyaa oo qoyan. Gubasho, xirxiray, caaryare - in la diido.
Cunto quudiya - suufka bjørk, aspen, acacia, saca, cagaar, maple. Qiimaha nafaqada ee ka mid ah laamaha sida aadka u la mid ah caws. Si kastaba ha noqotee, laguma talinayo in aad si joogto ah u siisid walxahaas - aan ka badnayn hal bil, ka dibna nasasho 10-15 maalmood.
Cawska jarjaran dalagyada xilliga qaboobaha. Ka hor inta aan soo saarin badeecadda waa in lagu qoyaa biyo kulul oo cusbayn. "Tufaax" waa in had iyo jeer la quudiyo si ay u noqoto cunnida qaab cusub oo diyaarsan, sidaas darteed diyaarintiisa waa inay bilaabataa 15-20 daqiiqo ka hor isticmaalka.
Cunto dalagyada dalaggu (barad, oatmeal) ayaa la siiyaa kariimayaasha aan isbeddelin, iyo cawska guga wuxuu ka wanaagsan yahay in uu horey u sii joogo.
Qaladaadka suurtagalka ah:
quudinta lab iyo dheddig ee nidaamka maalinlaha ah;
isbedel weyn oo ka yimaada nooc ka mid ah quudinta;
quudinta xad dhaafka ah ee dufanka waxay keeni kartaa kororka acidity ee mareenka caloosha iyo mindhicirka ee fitamiinada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida iyo waxa la siinayo lo'da jiilaalka.
Marka lagu daro quudinta tayada sare leh iyo isku dheeli tiran, lo'da, gaar ahaan xilliga qaboobaha, waxay u baahan tahay cabbitaan nadiif ah oo kulul. Hal shakhsi inta lagu jiro maalintii waa inay cabaan ugu yaraan 5 baaldiyo oo nadiif ah, taas, ka hor inta aanad ku shubin khamriga, waa in loo diiriyaa heerkulka qolka iyadoo la isticmaalayo taangiyo gaar ah ama nidaamyo hore loogu rakibay barniga.
Doorka muhiimka ah ee diyaarinta cunto isku dheelitiran oo dheellitiran waa fitamiino iyo macdan.
Haddii aaney jiri karin waqtigii loogu talagalay jirka, lo'du waxay horumarin kartaa xaalado taban:
wax soo saarka iyo dhalmada ayaa hoos u dhigi doonta;
koritaanka iyo saxitaanka miisaankaba waa ka sii dari doontaa;
Cudurrada qarsoon iyo kuwa dheeraadka ah ayaa sii kordhi doona.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan muuqaalo: kordhay kacsanaanta, gardarrada, garaaca wadnaha oo wareersan, neefta oo gaabisa, dhiig yari.
Ma taqaanaa? Cows waxay leeyihiin xasuus aad u fiican. Waxay si ula kac ah ula dhaqmaan dadka hal mar iyaga wax u dhiba, iyo jaceyl - beeralayda si joogto ah u daryeeli. Dadka xayawaankani waxay u muuqdaan kuwo muuqaal leh, urin, cod, midabo dhar ah.
Faytamiin kala duwan oo loogu talagalay buuxinta cuntooyinka xilliga qaboobaha waxaa lagu soo bandhigay suuqa beeraha casriga ah, ugu wanaagsan kuwaas oo ah:
Marka la eego cirbadeynta - "Eleovit", "Tetravit" (isku dhafan oo ku jira fitamiino A, B, E, folic acid, sulfur, nicotinic acid).
"Felutsen" - Kaalmada cuntada ee kor u qaadeysa heerka sileniinka, fitamiinada, birta iyo iodiin.
"BMVD" (protein macdanta iyo fitamiinada dheeraadka ah). Waxyaabaha ay ka kooban tahay: borotiinka caanaha, fibreerka, baruurta cufan, lizin, ash Cummaan, sonkorta, methionine, cystine. Daawada waa in lagu qaso feed.
Bilaha jiilaalka xoolaha ayaa la barbardhigi karaa dhibaatada dhabta ah, taniyo xilligaas xilligaas ayaa lo'da u baahan yahay fiiro badan iyo daryeel. Hase yeeshee, beeralayda adag ee shaqeeya, tani ma noqon doonto dhibaato halis ah - sabirkiisa, dadaalka iyo kharashyada si dhakhso ah ayuu u bixinayaa si buuxda.